Artemisa-Iinzuzo zayo ezinkulu zempilo | Bezzia
USusana godoy | 18/06/2022 14:00 | YeNtlalontle
Njengoko sisazi kakuhle, kukho izityalo ezininzi ezisinceda yonke imihla ngeenzuzo zazo ezinkulu. Kaloku, kule meko asiyi kusala ngasemva xa sikhankanya uArtemis. Ewe, ukuba awumazi ngeli gama, mhlawumbi ivakala iqhelekile kuwe ukuba siyakuxelela ukuba ikwabizwa ngokuba ngumhlonyane okanye iSt.
Mhlawumbi ngoku sele uluqondile uhlobo lwesityalo esithetha ngaso. Ewe, unazo ezininzi nelelo ze zempilo into ekufuneka uyazi Ukongeza, zonke zibuyela emva kwiminyaka emininzi, ngenxa yeso siphumo sisikhankanyileyo. Ke, asizukuyicingisisa ngakumbi kwaye siza kufumanisa ukuba zeziphi ezo mpawu zintle.
1 I-Mugwort ikunceda ukuba unciphise umzimba
2 Ukuphelisa iintlantsi zokuya exesheni
3 Uya kushiya emva kobunzima besisu
4 woyilibala intlungu
5 Ndingasithatha njani esi sityalo
I-Mugwort ikunceda ukuba unciphise umzimba
Ngokuqinisekileyo uhlala ujonge iindlela ezilungileyo zokulahla ezinye iikilos. Sele uyazi ukuba ayingombandela wokuyeka ukutya kodwa kukwazisa ukutya okunempilo. Ke, njengokuncedisa kwezo zidlo ziphambili zemini, siya kuba noncedo olukhulu lwesityalo iArtemisa. Ngenxa yokuba phakathi kweenzuzo zayo ezichazwe kakhulu, le yenye yezona zinto ziphambili. Ikunceda ukuba ulahlekelwe isisindo kuba sisityalo sokucoca. Yintoni enokuyenza oko kuya kuba yinto efanelekileyo yokukhupha umzimba. Sele uyazi ukuba ngokutya kwe-diuretic, uya kukuphepha ukugcinwa kwamanzi kwaye ngokubanzi, uya kuziva ungcono kakhulu.
Ukuphelisa iintlantsi zokuya exesheni
Abasetyhini abanezo cramps nyanga zonke baya kuyazi le nto sithetha ngayo. Ngenxa yokuba ukongeza ekubeni buhlungu kakhulu, esingazi nokuba sinxibe njani, asisoloko sifumana isisombululo esilungileyo sokuzola. Ke, ukuba ukhetha ukubheja kumayeza endalo, uArtemis uya kuba kwicala lakho. Uya kushiya emva kwe-colic yexesha kodwa kwakhona kukuba iya kuyilawula. Ngaphandle kokulibala ukuba, enkosi kuyo, uya kuba nokuhamba okungaphezulu. Ke, kuyo yonke le nto, kufuneka uzame. Awucingi?
Uya kushiya emva kobunzima besisu
Zininzi iingxaki zesisu esinokuba nazo imini yonke. Enye yezona zinto ziqhelekileyo kufuneka kunye nokwetyisa. Obo bunzima bubonakala emva kokutya buye bucaphukisa kakhulu. Ngendlela enye, ukwakhiwa kwegesi okanye i-reflux Babonisa ukuba ukwetyisa akuzange kulandele amanyathelo ngokuqhelekileyo kuthatha. Ngoko ke, ukuze uncede kwaye ngendlela yendalo, kuya kuba kwakhona esi sityalo esifanele sisithathele ingqalelo. Ngenxa yokuba kunciphisa zonke ezi zimpawu ngenxa yemisebenzi yayo yokucoca.
Nangona ngaphambi kokuba sithethe iintlungu zokuya exesheni, ngoku sibuyela kwiintlungu kodwa sibhekisela kumalungu. I-massage eneoli encinci ye-Artemis iya kukunika isiqabu oyifunayo. ngokuba ineempawu zokuthomalalisa. Ke, lixesha lokuzivumela ukuba uthathwe sisisombululo sendalo esifana nesi sokukhulula ezo ntlungu ziqatha ngamanye amaxesha zingakuvumeli ukuba uqhubeke yonke imihla.
Ndingasithatha njani esi sityalo
Emva kokubona izibonelelo eziphambili, uya kuzibuza ukuba ungayithatha njani ukuze uqale ukuqaphela ezo zibonelelo. Ewe, ilula kakhulu kuba uneendlela ezininzi. Kwisandle esinye ungayithatha ngendlela yokufakwa ngakumbi xa ikukunyanga iintlungu zexesha esizikhankanyileyo. Kodwa umzekelo, ukukhulula intlungu edibeneyo, unokwenza i-massage ngeoli ye-Artemis. Ukongeza kwi-infusion kunye neoli, uya kuyifumana kwi-powder kodwa ukuba uyisebenzisa ngale ndlela, zama ukungadluli kwi-3 grams ngosuku ngalunye. Ngendlela efanayo, ayifanelekanga kubasetyhini abakhulelweyo nokuba kwaye njengoko sihlala sithetha, akubuhlungu ukuba uya kuyifaka, qhagamshelana nodokotela wakho xa unezinye izifo kubantu abadala okanye uthathe olunye unyango.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » YeNtlalontle » I-Mugwort: inzuzo yayo enkulu yezempilo